အီဂျစ်ပြည်သို့ ယာကုပ်၏ ခရီးစဉ် | Jacob's Pilgrimage to Egypt | Real Conversion
အီဂျစ်ပြည်သို့ ယာကုပ်၏ ခရီးစဉ်
JACOB'S PILGRIMAGE TO EGYPT
(SERMON # 73 ON THE BOOK OF GENESIS)
၂၀၁၃၊ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲ့တော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊သခင်ဘုရားနေဘြွမ ။ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ဟောကြားသောဒေသနာတော်။
ခါနာန်ပြည်၌အစာခေါင်းပါးသောကြောင့်ယာကုပ်၏သားတို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့အစားစာဝယ်ယူရန် သွားရောက် ခဲ့ကြသည်။ ထိုပြည်၌သူတို့၏ညီ ယောသပ်သည် အီဂျစ်တစ်ပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးနေသည် ကိုတွေ့ကြသဖြင့် အံ့ဩခဲ့ကြသည်။ ယောသပ်သည်ကျွန်အဖြစ်ရောင်းခဲ့ခြင်းခံရသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်အတူရှိ၍ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်စိုးစံခွင့်ကိုရခဲ့သည်။ ယခုတွင်ယာကုပ်၏သားတို့သည် ပြန်လာကြပြီး ယောသပ်အသက် ရှင်လျှက်ရှိကြောင့်ကိုဖခင် ယာကုပ်အားပြောခဲ့ကြသည်။ ယာကုပ်သည် သူတို့၏စကားကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါ၊ သို့သော် သားတို့၏ ပြောစကားသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင့် ယာကုပ်သိလာခဲ့သည်။ ယာကုပ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
]ဣသရေလကလည်းတန်တော့။ ငါ့သားယောသပ် အသက်ရှင်သေး၏။ ငါမသေမှီသူ့ကိုသွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၄၅း ၂၈)
ယနေ့ညတွင်ထိုကျမ်းပိုဒ်သို့ ကျွှန်ုပ်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍မတ်တပ်ရပ်လျှက် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၆း ၁ မှ ၄ ကို ဖွင့်ထားကြပါစို့။
“ထိုအခါ ဣသရေလသည်မိမိဥစ္စာရှိသမျှနှင့် တကွခရီးသွား၍ ဗေရရှေဘအရပ်သို့ ရောက်လျှင်၊ မိမိအဘဣဇာက်၏ဘုရားသခင်အားယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုလေ၏။ ညာဉ့်အခါဗျာဒိတ်တော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်က၊ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်ဟုခေါ်တော်မူလျှင်၊ ယာကုပ်က အကျွှန်ုပ်ရှိပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ ထာ၀ရဘုရားကလည်း၊ ငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ သင့်အဘ၏ ဘုရားသခင် ဖြစ်၏။ အဲဂုတုပြည်သို့ သွားရမည့်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် ထိုပြည်၌သင့်ကို လူမျိုးကြီး ဖြစ်စေမည်။ အဲဂုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ တစ်ဖန်ငါ ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ယောသပ်သည် မိမိလက်ကိုသင်၏ မျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၁-၄)
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍၎င်းကျမ်းကို ဖွင့်ထားကြပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်လေးဆယ်တုံးက လီဘရယ် ဆီမီနာရီ ကျောင်း၌ ကျောင်းတက်နေစဉ်အခါတွင်၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်သည် ယာကုပ်မှ ဣသရေလဟူ၍ပြောင်းလဲခေါ်တွင်သော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွှန်ုပ်တို့အား သင်ကြား ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ၊ ကွဲပြားသော “စာရေးဆရာ” တို့က ခြားနားစွာရေးသားခဲ့ကြသည်။ စာရေးဆရာ “န” က ယာကုပ်ဟုခေါ်တွင်ရေးသားပြီး၊ စာရေးဆရာ တဦးဖြစ်သော “ R” က ဣသရေလဟူ၍သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်။ “အဘယ်သို့ ခွဲခြားသိမြင်ကြသနည်း ဟုကျွှန်ုပ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသဘောထားအမင်ကိုရှင်းလင်းအောင် ကျွှန်ုပ်အား မရှင်းပြခဲ့ပါ။ ဒေါက်တာ စီ အိပ်ခ်ျ လီပေါတ်၊ ဠုသာရင်းအနက်ပြန်ကျမ်းရေးသားသူက ၎င်းပျော့ပျောင်းသော သဘောတရားကို လက်မခံခဲ့ပါ။ ဆက်လက်၍ကြားခဲ့သည်မှာ- “ထိုသို့သောဝေဖန်ဆန်းစစ်သော အစီစဉ်အားဖြင့်အရာရာကို ထောက်ထား လုနီးပါးဖြစ်၏” (H. C. Leupold, D. D. Exposition of Genesis, Baker Book House, 1985 Edition, Volume II, p. 1106; comment on Genesis 46: 1-4).
ဒေါက်တာလီပေါတ်နာမည် နှစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ ယာကုပ်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်က် ရည်ညွန်းပြီး ဣသရေလဟူသည် လူမျိုးနွယ်စု ကိုရည်ညွန်းသည်ဟု အကြံပြုထားပါသည်။ ၎င်းရှင်းလင်းချက်က အဓိက ဟုတ်မှန်သယောင် ဖြစ်သော်လည်း စပါဂျန် ၏ ရှင်းလင်းချက်ကအဓိက ဖြစ်မည်ဟုထင်ရ၏။ စပါဂျန်ဟောကြားသည်မှာ အဟောင်း “ယာကုပ်” သည် နောက်ကိုပြန်လှည့်ခြင်းကိုသုံးနှုန်း၏ နာမည်သစ်ဖြစ်သော “ ဣသရေလ “ ဟူမူကား စိတ်နှလုံး အားဖြည့်ခြင်း အသက်ရှင်ခြင်းကို ဖော်ညွန်းပါသည်။ (ကမာ၊ ၄၅း ၂၇-၂၈)။ “ယာကုပ်သည် စိတ်နှလုံးအားဖြည့်၏။ “ ဣသရေလကလည်းတန်တော့။ ငါ့သားယောသပ် အသက်ရှင်သေး၏။ ငါမသေမှီသူ့ကိုသွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၄၅း၂၇-၂၈)။ ထိုနည်းလမ်းဖြင့်နာမည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွှန်ုပ်သဘောပေါက်မိပါသည်။ “ယာကုပ်”၏ အဓိပါယ်ကား “လှည့်စားသောသူ” ဟုမည်၊၊ “ ဣသရေလ” အဓိပ္ပါယ်ကား “ဘုရားသခင်၏မင်းသား” ဟုအဓိပ္ပါယ် ရှိသည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးတို့၌ နာမည်ဟောင်းရှိသကဲ့သို့ နာမည်အသစ်လည်းရှိသည်။ လူ့ဇာတိဟောင်းက လွှမ်းမိုးသေါခါ၊ ဘုရားသခင်က “ယာကုပ်” ဟုခေါ်မည်ဖြစ်သည်။ “အသက်ရှင်ခြင်း” က အသစ်သော အသက်တာဖြင့် အုပ်စိုးပြီး၎င်းကို” ဣသရေလ”ဟူ၍ခေါ်သည်။ သမာမျမ်းစာအရထိုရှင်းလင်းချက်သည်မှန်သည်။ အသက်ရှင်ခြင်းအဖို့ အမှန်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုးထိုအတွေ့အကြုံကိုခံစားရကြသည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ယာကုပ်” ဟူသည်လူသားဇာ တိနာမည်ဖြစ်သည်။ “ ဣသရေလ” ဟူသည်အသစ်သောဝိညာဉ် သဘာ၀ကိုခေါ်သည်။” (C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, Number 2. 116, p. 1). အသစ်သောနာမအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသား ယောသပ်ဆအဲဂုတ္တုပြည်သိုအရောက်သွားခဲ့သည်။ ဇာတိသဘောအားဖြင့် သားယောသပ်ဆီမသွားဝံ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ထာ၀ရဘုရားက ယာကုပ်အားထိုခရီးစဉ်မတိုင်ခင်အားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ယာကုပ်၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းနှစ်ခုကိုထိုအဲဂုတုပြည်ခရီးစဉ်၌ ကျွှန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။ ဤရှင်းလင်းချက်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရွှေကျမ်းပိုဒ် ထဲက အမှန်တရားနှစ်ခုကကျွှန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်အသကတာကိုအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ပထမ၊ ယာကုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွှန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်ပါသည်။
ယာကုပ်နှင့်မိသားစုတို့သည်သားယောသပ်အားသွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ဗရေရှေဘအရပ်၌ ခေတရပ်နားခဲ့ကြသည်။ ထိုအရပ်သည် ခါနန်ပြည်အပိုင်ပင်ဖြစ်သေး၏။ ထိုအရပ်ဒေသ၌ယာကုပ်သည်ယဇ်ပလင်ကိုတည်၍ ယဇ်ပူဇော်fခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍မတ်တပ်ရပ်လျှက်ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၆း ၁ ကို အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြပါစို့။
“ထိုအခါ ဣသရေလသည်မိမိဥစ္စာရှိသမျှနှင့် တကွခရီးသွား၍ ဗေရရှေဘအရပ်သို့ရောက်လျှင်၊ မိမိအဘဣဇာက်၏ ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုလေ၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၁)
အာတာ၊ ဗလျူပိန့် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ယာကုပ်၏အဲဂုတ္တုပြည်ခရီးစဉ်၌ ဦးစွာသော မှတ်သားစရာအဖြစ် ဘုရားသခင်ကို ယဇ်ပလင်တည်၍ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သည်။ ခေတ်ကာလ အဆက်ဆက် အတွေ့အကြုံအရ ဘုရားသခင် ကို ဦးစားလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ သားယောသပ်အားတွေ့ဆုံဖို့ရာ အသွားခရီး (အစမပြုခင်) အဘဣဇာက် ၏ဘုရားကို ယဇ်ပလင်တည်၍ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။” (Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition. p. 313).
ကျွှန်ုပ်၏ခရစ်ယာန်အသက်တာအစောပိုင်း၌လူတို့၏ပြောစကားကြားခဲ့ဖူးသည်မှာ၊သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က “ဦးဆောင်မှု” ပြု၍ အသင်းသားတဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပေးသည်ဟုကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် ၎င်းအတွေ့အကြုံက ရလဒ်အဆိုးတွေကို တွေ့ကြုံစေပါသည်။ ကျွှန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ၊ အသက်တာ၌ မည်သည့် အရာကိုမပြုခင် ဘုရားသခင်ကိုဦးထိပ်ထားဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ထိုကဲ့သို့ထိတွေ့ခံစားခဲ့ခြင်းမရှိလျှင်၊ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း ရှိမည်မဟုတ်၊ သင်းအုပ်ဆရာလည်းဖြစ်လာမည်မဟုတ်၊ အခြားသောအသင်းလူကြီးတို့လည်း ရှိမည် မဟုတ်ချေ။ ကျွှန်ုပ်အသက်တာပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ အခြားတို့ကိုအကြံပြုကြပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲများ ကိုနိုင်ပါသည်။ ကျွှန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအတိုင်းသာမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ကိုဦးထိပ်ထားပန်ဆင်လျှက်၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၃း ၁၇ ကို ဂရုစိုက်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
“သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်၍နှိမ့်ချလျက်နေကြလော့။ သူတို့သည် ကိုယ်တိုင် စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအလိုငှါစောင့်နေ၏။ သင်တို့အကျိုးကို မဖြစ်စေတတ်သောဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍၊ သူတို့သည် စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမည် အကြောင်း သတိပြုလျက်နေကြလော့။” (ဟေဗြဲ၊ ၁၃း ၁၇)
နောက်ပြီး ၁သက် ၅း ၁၂-၁၃ ကိုလည်းဂရုစိုက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
“ထိုမှတပါး၊ ညီအစ်ကိုတို့၊သင်တို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊သခင်ဘုရားအခွင့်နှင့် အုပ်စိုးခြင်း၊ သတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုသောသူတို့ကိုသိမှတ်၍၊သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့်မေတာစိတ်နှင့် အလွန်ချစ်ခင် လေးမြတ်မည် အကြောင်း၊ ငါတို့တောင်းပန်ပါ၏။ အချင်းချင်း အတင့်သင့်နေကြလော့။” (;၁သက်၊ ၅း ၁၂၊ ၁၃)
အသက်တာဘ၀သစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ် အတွက်၊ ကျွှန်ုပ်၏သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာတိမောတေလင်းနှင့် အကြံပေးဒေါက်တာ မန်ဖီလုမ်တိုနှင့် အမြဲတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ အချိန်နှင့် တပြေးညီတိကျမှန်ကန်မှုမရှိခဲ့သော်လည်း ထိုသူတို့၏ အကြံကိုလိုက်နာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကကျွှန်ုပ်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန် အလှည့်သင့်စေခဲ့ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား။
“ထာ၀ရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုးစားလော့။ကိုယ်ညာဏ်ကိုအမှီမပြုနှင့်။သွားလေရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကို မျက်မှောက်ပြုလော့။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ လမ်းခရီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်။ ငါသည်ပညာရှိ၏ ဟုကိုယ်ကိုမထင်နှင့်။ ထာ၀ရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လော့။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ အကြောတို့သည် အားသန်၍ အရိုးတို့သည် ခြင်ဆီနှင့်ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်။ ငါ့သား၊ ဌာ၀ရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမှတ်ဘဲမနေနှင့်။ သင်၏အပြစ်ကို စစ်ဆေး တော်မူသော အခါ စိတ်မပျက်စေနှင့်။ ထာ၀ရားသည် ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏။ နျစ်သက် တော်မူသော သားကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏။ ညာဏ်ပညာကို ရှာ၍ရသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။” (သုတ္တံ၊ ၃း ၅-၈၊ ၁၁-၁၃)
ယာကုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းက ဗေရရှေဘ အရပ်၌ ဘုရားသခင်ကိုဦးစွာ ကိုးကွယ်ယဇ်ပလင်တည်စေခဲ့ပါသည်။ ယာကုပ်သည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိခဲ့သော်လည်း ထိုယဇ်ပလင်တည်လျှက် ကိုးကွယ်အပြီးတွင် ရှင်းလင်း၍ ပြီးပြည့်စုံသော အလိုတော်ကိုသိနားလည်ခဲ့ပါသည်။
ကျွှန်ုပ်၏စားပွဲပေါ်တွင်ချထားသောစာအုပ်ငယ်ထဲကကောက်နုတ်ပြီး ဒီကနေ့တရားဒေသနာဝေငှဖို့မတွေးမိခဲ့ချေ။ တကယ်အထူးအဆန်းဖြစ်နေသည်။ စာမျက်နှာ ၁၇ ဖွင့်ထားလျှက်ရှိပြီး၊ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက၊ ဆောက်သမ် နှစ်ခြင်း သင်းအုပ်ဆရာ၊ သူမသေခင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဒဗလျူဟာဆဲလ်ဖေါတ် ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ၊
သုတ္တံ၊ ၃း၆၌ လမ်းညွန်ထားသည်မှာ၊ “သွားလေရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကို မျက်မှောက်ပြုလော့။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ လမ်းခရီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်။” ကျွှန်ုပ်အနေဖြင့် ၎င်းကျမ်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်သောငြိမ်သက်ခြင်းနျင့်အောင်မြင်ခြင်း ကျွှန်ုပ်ရရှိခံစားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကျမ်းစကား အတိုင်း အသက်မရှင်သောအခါ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်းတွေ့ကြရပါသည်။
ယနေ့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်အရာများစွာရှိနေပါသည်။ ဆိုကြပါစို့၊ အခြားသောမြို့တွင် လစာကောင်းပြီးအလုပ်လည်းကောင်းနေခဲ့ရင် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအလုပ်ရချင် ဇောဖြင့် ပြေးလွားပြီး ရွေးချယ်မလား သို့မဟုတ်လုရားသခင်ကိုမေးမြန်းမှာလား၊ သင့်ရဲကပညာရေးနှင့် ပါတ်သက်၍၊ သားသမီးအရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် စရာမြောက်များစွာရှိပါသည်။ မည်သည့်ကျောင်းက မိမ်ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ် မည်နည်း။ ကလေး များအတွက် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍စည်းကမ်းတင်းကြပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး မည်မျှလျှော့ပေါ့ရမည်နည်း။ မိမိတို့နေအိမ်အသစ်နှင့် ကားအသစ်အတွက်လည်း ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အတောက် ပြောင်ဆုံးသောအရာဟူသည် ဘုရားသခင်၏ အဖြေ ကိုစောင့်ဆိုင်းလုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လိုသည်။ စောင့်ဆိုင်းတတ်ခြင်းက အသည်းနှလုံးကြေကွဲခြင်းကို ဖြေပျောက်စေပါသည်။ (W. Herschel Ford, D.D. Simple Sermon on Life and Living, Zondervan Publishing House, 1971 edition, pp. 17, 18).
၎င်းစာအုပ်က ထူးဆန်းနေပြီး ၎င်းစာမျက်နှာ ဖွင့်လှစ်ထားသဖြင့်၊ ၎င်းထဲက တရားဒေသနာတော် ကိုရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဒေသနာပြင်ဖို့အချိန်ကြာကြာ မယူခဲ့ဘူး၊ ဘုရားသခင် ဒေါက်တာဖေါတ်၏ အကြံဥာဏ်အပေါ်အာရုံကိုရောက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ထိုဆရာပြောသည်မှာ “စောင့်ဆိုင်း” တတ်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အပြေးအလွား သွားရောက်ဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ပါ။ သူပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အကောင်း ဆုံးအတောက်ပဆုံးဟူသည်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမှလာသည်” ဟူ၏။ ကျွှန်ုပ်အကြံပြုချင်သည်မှာ သင့် အသင်းတော် သင်းအုပ်ဆရာနှင့် အမြော်အမြင်ရှိ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်းတို့၏ အကြံဥာဏ်ကိုရယူလိုက်ပါ။ အသင်းတော် ပြင်ပခေါင်းဆောင်များထဲကအကြံဥာဏ်မယူလိုက်ပါနှင့်။ အချို့သောတရားဟောဆရာတို့သည် သင့်၏ရှုပ်ထွေး သောပြသနာများကိုရှင်းထုတ်ဖို့သူတို့၏ အသင်းသို့ခေါ်ဆောင်တတ်သဖြင့် ၎င်းသည် ကျင့်ဝတ်နှင့် မညီညွတ်ပါ။ သင့်အသင်းတော်က သင်းအုပ်ဆရာနှင့် ခေါင်းဆောင်တို့ကသာလျှင်သင်၏ ပြသနာအသေးစိတ် ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ ယာကုပ်သည်ဗေရရှေဘ အရပ်၌ ခေတ္တရပ်နားပြီး ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပလင်တည်၍ ကိုးကွယ်လျှက်ညွန်ကြားခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာသည် ယာကုပ်၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။!
၂။ ဒုတိယ၊ ယာကုပ်၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ကျွှန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်ပါသည်။
ယခုကျွှန်ုပ်တို့၊ ယာကုပ်၏ခရီးစဉ်တယောက် ဗေရရှေဘ အရပ်သို့ခေတ္တနားခဲ့သည်ကို ကျွှန်ုပ်တို့ သိမြင်နိုင်ပါသည်။ သူသည် ကြောက်လန့် ဗေရရှေဘအရပ်၌ ခေတ္တနားခဲ့သည်ကို ကျွှန်ုပ်တို့သိရသည်။ ကျွှန်ုပ်တို့ဖတ်ခဲ့သော ကျမ်းပိုဒ်၌ ဘုရားသခင်က “အံဂုတ္တုပြည်သို့သွားရမည့်အကြောင်းမစိုးရိမ်နှင့်” (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၃)။ သူသည် ဗေသရှေဘ အရပ်၌ ခေတ္တနား၍ ယဇ်ပလင်ကိုတည်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားဖို့ ကြောက်၍ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အထံတော်ကရှင်းလင်းသော အလိုတော်ကို စောင့် ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။
စပါဂျန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ဗေရရှေဘ အရပ်၌ ယာကုပ်ခေတ္တရပ်နားပြီး ယဇ်ပလင်တည် ကိုးကွယ် ခဲ့ခြင်းသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွားရမည် မသွားရမည်လောဟု ဘုရာသခင်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ခေါင်းမာသောသူတို့သည် အမှားနှင့် အမှန်ကိုဝေခွဲမရဖြစ်နေသောသူတို့ကို အထင်အမြင်သေး ကြသည်ကို ကျွှန်ုပ်သိသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာအမြော်အမြင်ရှိသောခရစ်ယာန်တို့သည် ခေါင်းမာ တတ်ကြပြီး ဘယ်တော့မှ မိမိတို့အမှားကို မပြင်လိုဘဲဖြစ်နေကြသည်။ ထိုသို့ မဖြစ်ကောင်းပါ။ စပါဂျန် ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ- “ထာ၀ရဘုရားက မိမိတို့၏စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကိုမြင်စေသည်၊ စိုးရိမ်ခြင်းက မှန်ကန်သော လမ်းညွန်မှု ကိုပေးတတ်ပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်၊ သတိရှိစေခဲ့သည်။ ချိန်ခွင်မျှမှုရှိစေသည်။ အပူအအေး မျှတစေသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်အတွက် မှန်သောလမ်းကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။” (Metropolitan Tabernacle Pulpit, Volume 35, Sermon number 2,116, p. 639)
ယာကုပ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်၍ လူ့သဘာ၀ပင်ဖြစ်မည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သောသူတို့သည် အပြောင်းအလဲ မလုပ်လိုကြတောပေ။ ထိုအရာက အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော သူတို့သည် နုပျိုသောသူတို့ထက်အမှားနည်းစေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်အသက်နုပျိုသောလူငယ်လူရွယ် တို့သည် အသင်းတော်ရှိသက်ရင့်ပဂိုလ်တို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ရပါမည်။ အသင်းတော်ကိုသက်ရင့်ပုဂိုလ် တို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးသူတို့၏အကြံပေးသည့်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ပါလျှင်အမှားနည်းနိုင်သမျှနည်းမည် ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ယာကုပ်သည် အဖိုးတော်၊ အာဗြဟံထံဘုရားသခင်ပြောသမျှစကားကိုတစ်ဆင့် ကြားရသော ကြောင့်အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွားရောက်ဖို့ကြောက်ရွံ့ခဲ့သဖြင့် ယာကုပ်သိခဲ့သည်မှာ အဖိုးတော်အာဗြဟံ ၏ အိပ်မက်ရူပါရုံအတိုင်းအဲဂုတ္တုပြည်သည် “ကြောက်လန့်ဖွယ်မှောင်မည်း” သောပြည်ဖြစ်သည်ကိုကြောက်ရွံ့ နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ၊ ၁၅း ၁၂)။ ထို့ကြောင့် အာဗြဟံ၏ သားစဉ်မျိုးဆက်သည်ထိုအဲဂုတ္တုပြည်၌ နှစ်ပေါင်းလေးရာသုံးဆယ် ကျွှန်ခံရမည်ကိုသိသဖြင့်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါသည်။
ယာကုပ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်မှာ သူ၏သားသမီးတို့သည်ကြီးမားသောစုံစမ်းခြင်းကို ခံရမည် သိသော ကြောင်းဖြစ်သည်။ တောရွာမှမြို့ကြီးသို့ပြောင်းရွှေကလာသောအခါ၊ မကြာခဏစိုးရိမ်ထိတ်လန့် ခဲ့ကြသည်မှာ၊ ကြီးစွာသောစုံစမ်းခြင်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သာသနာပြုဆရာကြီးစီတီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အလုံခြုံဆုံး နေရာသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ နေခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ ဘုရားသခင်က ယာကုပ်အား “အဲဂုတ္တုပြည်သွားဖို့မစိုးရိမ်နှင့်” ဟူ၍ပြောခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယာကုပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ယာကုပ်နှင့် မိသားစုအဖို့ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ အဲဂုတ္တုပြည်၌ နေထိုင်ခြင်းသည် အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်သည်။
လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ မိသားစုအသင်းတော်ကိုစွန့်ခွါပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ လစ်ဘရယ် ဆီမီနာရီ ဓမ္မ တက္ကသိုလ်ကိုသွားရောက်ခဲ့သည်ကို အမှတ်ရနေဆဲပါ။ ထိုနေရာသို့ကြောက်ရွံ့ ခြင်းနှင့်ကျွှန်ုပ်သွားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ၊ လစ်ဘရယ်ဆန်ပြီး မယုံကြည်ခြင်းမတည်မြဲသော ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်းသီဪလော်ဂျီ ဓမ္မတက္ကသိုလ် ထိုအချိန်၌ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွန်ဆာဖေးတစ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကို သွားရောက်ပညာသင်ယူဖို့ကျွှန်ုပ်၌ ငွေအလုံ အလောက်မရှိ၍ ထိုကျောင်းသို့သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွှန်ုပ်၏သင်းအုပ်ဆရာက ထိုလစ်ဘရယ်ဆီမီရီကျောင်း ကိုသွားစေလိုပါသည်။ သူကကျွှန်ုပ်ကိုအထိမနာစေခဲ့ပါ။ သူပြသသောနည်းမှန်ကန်ပါသည်။ ကျွှန်ုပ် အသက်တာကို လုံးလုံးလျှားလျှားမဖျက်စီးခဲ့ပါ။ ကျွှန်ုပ်အားအထိမနာစေခဲ့ပါ! ထိုနေရာသို့ အကျွှန်ုပ် မသွားခဲ့လျှင် ယနေ့ကျွှန်ုပ် သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ လစ်ဘရယ်ကျောင်းသို့မသွားကြဖို့ လူငယ်လူရွယ fတို့အား လမ်းညွန်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုနေရာသို့သွားခြင်းက ကျွှန်ုပ် အတွက် ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်ကယာကုပ်အား “အဲဂုတ္တုပြည်၌သင်နှင့်အတူငါသွားမည်တဖန်ငါဆောင်ခဲ့အုံးမည်” (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း၄)။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်ကျွှန်ုပ်အပေါ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဘုရားမပါသောဓမတကသိုလ်သို့ ကျွှန်ုပ်နှင့်အတူဘုရားသခင် အတူရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုကျောင်းတော်မှပြန်လည်ဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကျမ်းစာကျောင်းသည်ကျွှန်ုပ်၏ အဲဂုတ္တုပြည်နှင့် ဂေသရှေမန်ဥယာဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသခင်သည် ကျွှန်ုပ်အားထိုအတွေ့အကြုံ ထဲသို့ပို့ဆောင် ခွန်အားပေးခဲ့ပါသည်။ ဓမသီချင်းဟောင်းတစ်ပိုဒ်၌ သီကုံးထားသည်မှာ-
ယေရှုကိုမှီဝဲ ခိုလုံသော ဝိညာဉ်ကို
ငရဲမင်းက တိုက်လှန်ရန် အားထုတ် သောက၊ ဘယ် ကာလ၌မျှငါမစွန့်
လုံလောက်စွာ ငါကျေးဇူးပေါ်လာလိမ့်မည် အစဉ်
မီးသင့်ကိုမနာစေရ ငါစီရင်မည်သင့်ချော်ကျွမ်းစေ၍ သင့်ရွှေချွှတ်အံ့
(၁၇၈၇၊ “K” Rငစစသညဒျ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်သောယုံကြည်ခြင်းတိုက်မြစ်ကျူး)။
ယနေ့ည ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲက ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုသင်တို့အားဝေငှလိုပါသေးသည်။ အချို့သောသူတို့က ယေရှုထံချဉ်းကပ်ဖို့ ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြသည်။ ကယ်တင်ရှင်အားကိုးစားဖို့စိုးရွံ့နေသည်။ အထိရောက်ဖို့အကြံပေးပါရစေ။ ထိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်မာန်နတ်ထဲကရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်ကရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် စာတန်ပို့လွှတ်လိုက်သော ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောက်ရွံ့ခြင်းက သင့်အားချည်နှောင်ထားသည်။ ဘုရားသခင်က ယာကုပ်အား “ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွားရမည့်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၃) သင့်အပြစ်ကို စစ်ဆေးသောအခါ၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြသောအခါ မစိုးရွံ့ပါနှင့်။ အဲဂုတုပြည် အဆိုးအညစ်ကဲ့သို့သင့်နှလုံးသား ဆိုးညစ်ခြင်း ကို စစ်ဆေးသောအခါ မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်။
ကယ်တင်ရှင်ယေရှုထံသွားရန်မကြောက်ပါနှင့် ယောသပ်သည်ယေရှု၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်ကိုသတိရလိုက်ပါ။ သင့် နှလုံးသားထဲအပြစ်စစ်ဆေးသောအခါ ဘုရားသခင်သင်နှင့်ရှိနေသည်။ ဘုရားသခင်သည်ယေရှုထံကျွှန်ုပ်တို့၏ ယောသပ်ထံ သို့သွားသောအခါအတူရှိပြီး လမ်းပြလျှက်ထိုအပြစ်မှ တစ်ဖန်ဆောင်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကျမ်းပိုဒ် ၃နှင့် ၄ ကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြပါစို့။
“ထာ၀ရဘုရားကလည်း၊ ငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ သင့်အဘ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ အဲဂုတ္တု ပြည်သို့ သွားရမည့်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် ထိုပြည်၌သင့်ကို လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ အဲဂုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ တစ်ဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ယောသပ်သည် မိမိလက်ကို သင်၏ မျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၃-၄)
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ “အဲဂုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ တစ်ဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ယောသပ်သည် မိမိလက်ကို သင်၏ မျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”! ယောသပ်၏လက်သည် ယာကုပ် သေသောအခါ ၎င်း၏ မျက်လုံးကိုပိတ်ပေးမည်ဟုဆိုပါသည်။ ယေရှု၊ ကျွှန်ုပ်တို့၏ယောသပ်၏ လက်သည် သင်တို့မျက်စိ၌ တင်တော်မူ သည်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြည့်စမ်းပါ။ “မကြောက်ပါနဲ့” ယေရှုကသင့်အပြစ် ငရဲ ထဲမှ ကယ်တင်ပေးပါ လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်သင်တို့အားယနေ့ညတွင်မိန့်တော်မူ သည်မှာ-
iရဲမင်းက တိုက်လှန်ရန် အားထုတ် သောက၊ ဘယ် ကာလ၌မျှငါမစွန့်
“ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်သောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှါ၊ ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည် ဟူသောစကားသည် သစာစကားဖြစ်၏၊ အကြွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏။ အပြစ်ရှိသော သူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏။” (၁တိ၊ ၁း ၁၅)
“အဲဂုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ တစ်ဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ယောသပ်သည်မိမိလက်ကိုသင်၏ မျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၄)
အကယ်၍ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါက အနောက်ဘက်ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့လျှောက်သွားပါ။ မစတာ ဂရိဖက်စ် သီဆိုသကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်နေသောနေရာ၌ ဒေါက်တာ ကေကန်က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မည်။ “ယုံကြည်ခြင်းတိုက်မြစ်ကျူး”
- ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာအေဘယ်လ်ပရိုဟုန်းမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၅း၂၅-၄၆း၄ ကိုဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၈၇၊ “K” Rippon's
၏အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်ထားသော “ယုံကြည်ခြင်းတိုက်မြစ်ကျူး” ကိုသီဆိုပေးပါသည်။
(ကမ္ဘာဦီးကျမ်း၊ ၄၅း ၂၇-၂၈)
၁။ရညဘျစးရညဘျစးပထမ၊ ယာကုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွှန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်ပါသည်။ (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း၁၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၃း၁၇၊ ၁သက်၊၅း၁၂၊၁၃၊ သုတ္တံ၊ ၃း ၅-၈၊ ၁၁၊ ၁၃)
၂။ရညဘျစးရညဘျစးဒုတိယ၊ ယာကုပ်၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ကျွှန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်ပါသည်။ (ကမ္ဘာ၊ ၄၆း ၃၊ ၁၅း ၂၂၊ ဘြွမ ။၄ြွ၆း ၄၊ ၁တိ၊ ၁း ၁၅)